Hevitra MPANOHARIANA | Oktobra 2011
Na diplomasia na miaramila
2011-10-13 @ 21:19 in Ankapobeny
Haody! haody ry Malagasy sy izay mahay teny malagasy rehetra. Toa mangina hoaho ny tontolon'olo-tsotra mampita izay hitany, tsikariny, ny eritreriny sy ny maro hafa ihany koa? Misy ihany ny miresaka fa vitsy dia vitsy indrindra ny an'ny mpanohana ny tolona hamerenana ny hasin'i Madagasikara nosimbain'ny fanonganam-panjakana! Efa lefy angaha ny tolona natao? Soa fa misy ny vondrona mijoro mandrakariva mampita hatrany ny tolona ka ahafahana manaraka hatrany ny vaovao avy eny an-kianja mba mampifandanja ny vaovaon'ny haino aman-jery manamaivana ny tolona lavitr'ezaka atao satria mety tsy mahaliana angamba ny fitadiavana tsy hikorontana sy mitandro ny filaminana.
Faly aho! tena faly... tsy sanatria manoratsora-poana ny fomba fitenin'olona iray fanta-daza fa mba afaka mirehareha tokoa ny tena ankehitriny. Nahoana? Efa hatramin'ny 2009 aho no nanisika hoe karazana movansa iray ny tafika malagasy ka tokony ifanarahana ihany koa raha tiana marina ny hamahana ny krizy. Manoatra noho izany anefa ny nandraisan'ny SADC ny Tafika Malagasy amin'ny ankapobeny ka izao ry zareo mitondra solontenan'ny tafiky ny SADC izao.
Raha nitondra ny fanelanelanana taty ny solontenan'ny Troika mialoha ny amin'izao fotoana andalovany eto amintsika amin'izao fotoana izao dia nanao fihetsika manokana somary nandidy ankolaka izay ny mpitarika ao amin'ny mpitandro ny filaminana telo tonta. Raha ny kendrena tamin'ilay izy raha jerena amin'izao, sady tsy nety nilaza tamin'ny mpanao gazety izay nentiny tamin'ny diplomaty avy amin'ny Troika moa ry zareo, dia hoe tsy hahatafiditra izay Marc Ravalomanana eto Madagasikara izany ianareo raha mbola mijoro koa ny tafika malagasy. Izany hoe kendrena mba tsy hisy idiran'ny anarana Marc Ravalomanana intsony izay fifanarahana rehetra atao. Ankehitriny raha tonga eto ny solontenan'ny tafika avy amin'ny SADC dia noho iny fihetsika iny. Nety ve noho izany ilay paika nokendren'ny avy amin'ny tafika malagasy?
Tsy nisy lanjany avokoa ny fifanarahana rehetra natao teo aloha sy ny fifampidinihana isan-karazany rehefa tsy nampidirina tanaty sehatra fifanarahana ny miaramila fa nanao karazana mpitondra ny teny sady mpanapa-kevitra farany tsy azo ivalozana ka izay tiany no tanterahana avy eo na inona na inona fifanarahana vita ary tsy nampahomby hatrizay ny efa vita sonia rehetra na dia olona na movansa iray aza no eritreretintsika ho tsy manaja ny soniany. Tsy nahavita nitsipaka ankitsirano izay nosoniaviny iny olona iny raha tsy misy ny tao ambadika sady manana hery izy dia ny avy ao amin'ny tafika izany. Hitan'ny Troika io tranga io ka dia izao nampiarahany tamin'ny diplomaty izao ny solontenan'ny miaramila avy ao amin'ny vondro-pirenena eto amin'ny Faritra atsimo sy atsinanan'i Afrika. Na nampialohaviny lalana mba hahafahan'ny mpanao politika mivory milamina avy eo.
Fahadisoana tetika noho izany ny nataon'ny Tafika Malagasy toy ny madidy dia homana mandrava efa amin'ny fifanarahana ezahina vitaina hialana haingana amin'ity krizy mitarazoka ity. Tsy nifampidera basy na fitaovam-piadiana ny roa tonta (Tafika Malagasy sy ny tafiky ny SADC) fa nifandresy lahatra amin'ny anjara toeran'ny Tafika rehefa anatin'ny krizy. Fahadisoan-kevitra satria efa hita ihany ny tsy dia fankasitrahan'ny mpikambana maro tao amin'ny SADC handefa Tafika eto Madagasikara, raha nitsikilo ny telegrama ifandefasan'ny masoivoho amerikana amin'ny sekreteram-panjakana Amerikana tafavoaka ireny isika. Ny Tafika Malagasy indray no nanery ny Tafika SADC hiditra an-tsehatra na dia mirona kokoa amin'ny diplomasia aza no anton-dia eto. Matoa tsy hay tohaina ny fahatongavan'ny solontenan'ny Tafiky ny SADC dia noho ny fampidiran'ny andaniny azy.
Hatreto dia hitako ny fahombiazan'ny fanelanelanana rehefa niditra ny Tafika-Diplomaty. Karazany tafapetraka amin'ny hasiny ny mpanelanelana satria manana Hery koa izy ao ambadika. Mampihatra izay nifanarahana izao no hotontosaina ka "nilaina nampanginina" ny Tafika Malagasy. Rehefa tafapetraka amin'ny toerany ny Tafika Malagasy dia anjaran'ny mpanao politika amin'izay no miresaka. Manantena aho fa ho moramora amin'izay ny hisian'ny fandrafetana ny andrim-panjakana satria tsy hisy afaka ny hibahana intsony na iza na iza; ary ny mety hampihomehy aza dia hanaiky mora ny mpanao politika amin'izay mety ho fetr'isan'olona betsaka indrindra ifampizaran-tseza rehefa miteny ny isa ambony indrindra azo ekena ny "mpampihatra ny tondrozotra" fa tsy mpanelanelana intsony angamba hoy aho. Raha mbola miadaladala sanatria ny Tafika Malagasy dia ireo niady hevitra taminy nandritra ny adiny folo ihany no hamerina kely amin-dry zareo izay efa nifanarahana sy ny anjara toeran'ny mpitandro ny filaminana.
Jentilisa, Antananarivo 13 oktobra 2011 amin'ny 23:20